Usoro nkuzi - Geofumadas
Ihe ọhụụ ọ bụla nwere ndị na-eso ụzọ ya bụ ndị, mgbe etinyere ha, gbanwere ọrụ dị iche iche. PC gbanwere ụzọ anyị si edozi akwụkwọ anụ ahụ, CAD zigara tebụl ịbịaru na ụlọ nkwakọba ihe; email ghọrọ usoro ndabara nke usoro nkwukọrịta. Ha nile mechara soro ụkpụrụ zuru ụwa ọnụ, ọ dịkarịa ala ebe ...
Usoro - BIM Ọrụ Usoro nkuzi
BIM Course - Usoro iji hazie iwu
Ebumnuche BIM amụrụ dịka usoro maka ịhazi data na ọrụ nke usoro ihe owuwu, injinia na ihe owuwu. Agbanyeghị na itinye n'ọrụ ya gafere ebe a, mmetụta ya kasịnụ emeela n'ihi mkpa na-arịwanye elu maka mgbanwe nke ngalaba iwu ihe owuwu yana onyinye dị iche iche dị ...
BIM Usoro nkuzi
Ntughari di elu, elu, uzo. Mụta imepụta atụmatụ na ọrụ linear na Autocad Civil3D sọftụwia etinyere ...